DVB TV Live Online
by DVB TVonline
38 watching ဒီဗီဘီ ရုပ်မြင်သံကြား အွန်လိုင်း တိုက်ရုိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်ဒီဗီဘီ ရုပ်မြင်သံကြား နေ့စဉ် ထုတ်လွှင့်ချက် အစီအစဉ် ဇယားhttp://burmese.dvb.no/archives/93936မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက တီဗီပရိသတ်တွေအတွက်...
DVB TV - ရယ်ရမောရသတင်းလောကအစီအစဉ် - Duration: 28 minutes.
72 views1 hour ago 3:22
DVB TV -ပြည်​မြို့​ဗိုလ်​ချုပ်​​မွေး​နေ့ ပဲပြုတ်​နံပြားကျွေး ​အမှတ်​တရအင်္ကျီ ဝေငှမြင်ကွင်း - Duration:3minutes, 22 seconds.
137 views3 hours ago 2:13
DVB TV - လပွတ္တာမြို့ မီးလောင်မှုမှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲနဲ့ကြုံ - Duration:2minutes, 13 seconds.
123 views4 hours ago 2:45
DVB TV - အခုနှစ်နွေရာသီမြန်မာနိုင်ငံမှာအယ်နီညိုရာသီဥတုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီးလယ်ယာတွေထိခိုက်နိုင် - Duration:2minutes, 45 seconds.
113 views4 hours ago 2:22
DVB TV - မကွေးတိုင်း၊ ကံမမြို့မှာ ၆၉-နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် - Duration:2minutes, 22 seconds.
160 views5 hours ago 2:04
DVB TV - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်သစ်မှာ ကော်မတီသုံးရပ်ကို စတင်ဖွဲ့စည်း - Duration:2minutes,4seconds.
123 views5 hours ago 2:08
DVB TV - ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ ပွိုင့်အပန်းဖြေစခန်းကို အဆင့်မြင့်တင် - Duration:2minutes, 8 seconds.
128 views5 hours ago 2:45
DVB TV - အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေလည်စေဖို့ဆောင်ရွက် - Duration:2minutes, 45 seconds.
142 views5 hours ago 1:56
DVB TV - မြဝတီမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ၆၉နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား - Duration: 116 seconds.
143 views5 hours ago 2:08
DVB TV - စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုတွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုရေးအတွက် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ - Duration:2minutes, 8 seconds.
102 views5 hours ago 12:42
DVB TV - သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများ - Duration: 12 minutes.
160 views5 hours ago 25:13
DVB TV - ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်မြို့တော် မောင်တောတ၀ိုက်ဆီသို့ တို့ပြည် တို့မြေအစီအစဉ် - Duration: 25 minutes.
134 views5 hours ago View all
DVB Roadshow တို့ပြည်တို့မြေ
134 views5 hours ago 24:51
DVB TV - တို့ပြည်၊ တို့မြေမှ ငရုတ်ကောင်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင် - Duration: 24 minutes.
6,170 views1 week ago 25:21
DVB DPDM 2.9 - တို့ပြည်တို့မြေ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကဒုံကနိဒေသ - Duration: 25 minutes.
7,180 views1 week ago 18:22
DVB DPDM 2..9 - တို့ပြည်တို့မြေ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ - Duration: 18 minutes.
3,059 views1 week ago 25:25
DVB DPDM 2.8 - တို့ပြည်တို့မြေ မဟာရန်ကုန် တဖက်ကမ်း ... ဆီသို့ - Duration: 25 minutes.
8,991 views2 weeks ago 25:24
DVB DPDM 2.7 - တို့ပြည်တို့မြေ နာဂတောင်တန်း..ဆီသို့ - Duration: 25 minutes.
4,733 views4 weeks ago 25:23
DVB DPDM 2.6 - တို့ပြည်တို့မြေ ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း..ဆီသို့ - Duration: 25 minutes.
6,531 views1 month ago 25:24
DVB DPDM 2.5 - တိုပြည်တို့မြေ ရှမ်းတောင်တန်းများ....ဆီသို့ - Duration: 25 minutes.
6,867 views1 month ago 25:06
DVB - DPDM 2.4 - တို့ပြည်တို့မြေ ကန္တာရ၀တီတိုင်းဆီသို့ - Duration: 25 minutes.
12,539 views1 month ago 25:06
DVB - DPDM 2.3 - တို့ပြည်တို့မြေ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းဒေသ - Duration: 25 minutes.
10,586 views1 month ago 24:23
DVB - DPDM 2.1 - ချွေးမြို့တော် (သို့မဟုတ်) ချောက်ရေနံမြေ - Duration: 24 minutes.
5,072 views2 months ago 25:15
DVB RoadShow #2.0 - တို့ပြေတို့မြေ - ကရင်ပြည်နယ် သောင်ရင်းမြစ် - Duration: 25 minutes.
8,227 views2 months ago View 30+ more
DVB Debate - လွှတ်တော်သစ် အခင်းအကျင်း - Duration: 44 minutes.
5 days ago6,389 views DVB TV - "လွှတ်တော်သစ်အခင်းအကျင်း""တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးစားပေးရွေးချယ်တယ်လို့တော့ ခံစားရပါတယ်...ဒါပေမယ့် တကယ်တန်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုပေးတဲ့နေရာမျိုးဟာ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် အခွင့်အရေးပေးနိုင်တဲ့...
DVB Debate - အစိုးရသစ်လက်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မလဲ - Duration: 45 minutes.
2 weeks ago15,562 views DVB Debate- “ အစိုးရသစ်လက်ထက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မလဲ" “၅ ရက် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကနေ အစုအဖွဲ့အသီးသီးက တင်ပြလာတဲ့ အချက်တွေ ထွက်လာတယ် သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ အချက်တွေတော့ မပါလာပါဘူ...
DVB TV -“အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ဘယ်လိုလျော့ ချနိုင်မလဲ’’ - Duration: 45 minutes.
3 weeks ago9,647 views DVB TV -“အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ဘယ်လိုလျော့ ချနိုင်မလဲ’’ ``အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင် မဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကို ဆင်းရဲမွဲတေမှုလိုဆိုပါတယ်။ ကနေ့ရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှုန်း ၂၆ရာခိုင်နှုန်းဆ...
DVB - #Debate လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေက ဘာတွေလဲ - Duration: 44 minutes.
1 month ago20,515 views DVB TV - လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေက ဘာတွေလဲ
DVB TV - “လူငယ်တွေမူးယစ် သားကောင် မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ’’ - Duration: 44 minutes.
1 month ago10,265 views DVB TV - “လူငယ်တွေမူးယစ် သားကောင် မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ’’"ကုသရေးထက် အမှန်က ကာကွယ်ရမှာ...ဥပမာ ဘိန်းဆိုရင် စိုက်ပျိုးပြီးတော့မှ ဘိန်းဖြစ်လာတာ...စိုက်ပျိုးဧရိယာကို အရင်လျော့ချရမှာ""ဖမ်းမိတဲ့...
DVB Debate -စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်ရရှိအောင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ - Duration: 45 minutes.
2 months ago15,502 views DVB Debate -"စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ရရှိအောင် ဘယ်လိုသွားကြမလဲ" " အခုဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေဟာ ထိုးစစ်လား မတော်တဆဖြစ် တဲ့စစ်ပွဲတွေလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် အခုနောက်ပိုင်း...
DVB TV - " လိင်အလုပ်သမားတွေကို အကာအကွယ်ဖြစ်မယ့် ဥပဒေလိုအပ်နေပြီလား" - Duration: 45 minutes.
2 months ago18,031 views DVB TV - " လိင်အလုပ်သမားတွေကို အကာအကွယ်ဖြစ်မယ့် ဥပဒေလိုအပ်နေပြီလား"" တစ်ကယ်ကို စနစ်တကျနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ပေးတဲ့ ဥပဒေရှိသင့်တယ်...ကျမတို့ လိင်အလုပ်သမားတွေမှာ မတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေခံနေကြရ...
DVB TV - ''ပြည်ပခရီးသွားတွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ" - Duration: 44 minutes.
2 months ago10,735 views DVB TV - ''ပြည်ပခရီးသွားတွေကို ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲ"" Tourism တိုးတက်ချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ အဝေးကြီးကို သိပ်မျှော်လို့မရသေးဘူး...ပိုက်ဆံ နိုင်ငံတကာမှာစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်...လ...
DVB TV - "မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုအစိုးရသစ်အဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာမလဲ - Duration: 45 minutes.
2 months ago9,080 views DVB TV - "မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုအစိုးရသစ်အဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာမလဲ"" ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးက အစိုးရနဲ့လူထုကြားထဲမှာပါ ပျောက်ခဲ့တယ်...အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ နောင်တက်လာမယ့်အစိုး...
DVB - #Debate နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲအထူးဒီဘိတ် - Duration: 44 minutes.
2 months ago12,899 views DVB TV - ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲအထူးဒီဘိတ်
DVB TV - နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဒီဘိတ် - Duration: 1 hour, 27 minutes.
3 months ago31,782 views DVB TV -" နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဒီဘိတ် ""ကျနော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင် စုလေ... တိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကို ဒုတိယအကြိမ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်လို...
DVB - လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာကြောင့်မဲပေမလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မဲပေးကြ မလဲ - Duration: 45 minutes.
3 months ago9,725 views DVB TV - လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ဘာကြောင့်မဲပေမလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မဲပေးကြ မလဲ
Nay Zaw Naing's weekly programs
DVB -ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား - Duration: 14 minutes.
13,674 views1 year ago 14:11
DVB -26-11-2014 ပြောပြရင် ဒေါ်ပွမှာလား - Duration: 14 minutes.
6,696 views1 year ago 15:37
DVB -22-10-2014 ပြောပြရင် ဒေါပွမလား - Duration: 15 minutes.
13,352 views1 year ago 14:59
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄) - Duration: 14 minutes.
18,234 views1 year ago 13:04
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄) - Duration: 13 minutes.
18,329 views1 year ago 12:55
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၀၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄) - Duration: 12 minutes.
12,002 views1 year ago 10:59
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄) - Duration: 10 minutes.
12,787 views1 year ago 14:23
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား ( ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄) - Duration: 14 minutes.
11,869 views1 year ago 10:42
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၄) - Duration: 10 minutes.
19,911 views1 year ago 10:50
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၄) - Duration: 10 minutes.
42,640 views1 year ago 11:20
DVB - ပြောပြရင်ဒေါပွမှာလား (၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၄) - Duration: 11 minutes.
29,773 views1 year ago 9:21
DVB - ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား (၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၄) - Duration:9minutes, 21 seconds.
39,918 views1 year ago View 23 more
DVB - မီဒီယာဖိနှိပ်မှုအတွက် သမ္မတကို သတင်းထောက်တွေဆန္ဒပြ - Duration:2minutes, 40 seconds.
13,494 views1 year ago 1:32
DVB - သမ္မတကုို ဆန္ဒပြတဲ့ သတင်းထောက်တွေကုို ပုဒ်မ၁၈နဲ့ အရေးယူမည် - Duration: 92 seconds.
5,554 views1 year ago 2:48
DVB - ယူနတီ သတင်းသမား ၅ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်၁၀နှစ်စီ ချမှတ် - Duration:2minutes, 48 seconds.
17,378 views1 year ago 1:40
DVB - သတင်းထောက်တွေရဲ့ ထောင်ဒဏ်ကို ပြန်သုံးသပ်သင့်ကြောင်း ဒေါ်စုပြော - Duration: 100 seconds.
6,287 views1 year ago 2:36
DVB - ကြားဖြတ်အစိုးရသတင်း ဖော်ပြတဲ့ ဂျာနယ်ကို အရေးယူမယ် - Duration:2minutes, 36 seconds.
3,062 views1 year ago 2:12
DVB - သတင်းယူစဉ် ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့အပေါ် သတင်းထောက်များ ရှုတ်ချ - Duration:2minutes, 12 seconds.
2,435 views1 year ago 1:52
DVB - ပဋိပက္ခ သတင်းယူရာမှာ အုပ်စုဖွဲ့သွားဖို့ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် အကြံပြု - Duration: 112 seconds.
1,786 views1 year ago 0:49
DVB - ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ ထောင်က လွတ်ပြီ - Duration: 49 seconds.
1,879 views1 year ago 1:44
DVB - စာနယ်ဇင်းသတင်းသမားများကို အရေးယူရင် - Duration: 104 seconds.
2,028 views1 year ago 2:58
DVB - သတင်းစနစ်တကျထုတ်ပြန်မှုရှိရင် အရေးယူမှု ထိရောက်နိုင် - Duration:2minutes, 58 seconds.
977 views1 year ago 2:48
DVB - ပြန်ကြားရေးက အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာဥပဒေကြမ်းကို ပြန်ရုတ်သိမ်း - Duration:2minutes, 48 seconds.
2,132 views10 months ago 3:37
DVB - သတင်းထောက်တွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုအပေါ် ကန့်ကွက်လှုပ်ရှား - Duration:3minutes, 37 seconds.
1,403 views10 months ago View 1 more
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သတင်းမှတ်တမ်းစု
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားမှု သတင်းမှတ်စု
DVB - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်ပင်လယ် ဟောပြောချက် - Duration: 38 minutes.
17,072 views1 year ago 25:58
DVB - မင်းကိုနိုင် အောင်ပင်လယ်ကွင်း ဟောပြောချက် - Duration: 25 minutes.
7,637 views1 year ago 8:32
DVB - မန္တလေး အောင်ပင်လယ်ကွင်းထဲက လူထုအသံ - Duration: 8 minutes, 32 seconds.
7,648 views1 year ago 40:15
DVB - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်း ဟောပြောချက် - Duration: 40 minutes.
48,412 views1 year ago 22:57
DVB - မင်းကိုနိုင် ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်း ဟောပြောချက် - Duration: 22 minutes.
10,553 views1 year ago 2:53
DVB - ဆူဆူပူပူဖြစ်ရင် တိုင်းပြည်နစ်နာမယ်လို့သမ္မတ သတိပေး - Duration:2minutes, 53 seconds.
5,159 views1 year ago 0:44
DVB - အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲအကြို စည်းရုံးလှုံ့ဆော် - Duration: 44 seconds.
3,028 views1 year ago 2:24
DVB - ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲ အောင်ပင်လယ်မှာ ပြင်ဆင် - Duration:2minutes, 24 seconds.
3,361 views1 year ago 1:52
DVB - ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ စာနယ်ဇင်းမီဒီယာ တွေ့ဆုံ - Duration: 112 seconds.
2,211 views1 year ago 2:54
DVB - မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုရေးရှေ့ပြေး မြို့နယ် ၃ခု စမ်းသပ်ကောက်ခံမယ် - Duration:2minutes, 54 seconds.
DVB - အီဘိုလာရောဂါ သံသယရှိသူအားလုံး စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးနေ - Duration:2minutes, 35 seconds.
12,282 views1 year ago 1:42
DVB - အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဆေးရုံ ၁၉ ခု ပြင်ဆင် - Duration: 102 seconds.
2,995 views1 year ago 2:10
DVB - အီဘိုလာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကူးစက်အောင် အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင် - Duration:2minutes, 10 seconds.
3,541 views1 year ago 3:47
DVB - အီဘုိုလာရောဂါ သတိပေးချက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန် - Duration:3minutes, 47 seconds.
4,216 views1 year ago This item has been hidden
advertorial - Playlist
DVB - ပုဂံအနှံ့ ခြေဆန့်စေမည် Buggy
DVB Artist Profile - Playlist
Memories of 2015 Part 3
Memories of 2015 Part-2
Artist Profile - Memories of 2015 Part 1
Talk2DVB - Playlist
DVB - talk to DVB
အင်တာနက် စာမျက်နှာ - Playlist
DVB TV -အင်တာနက်စာမျက်နာအစီအစဉ်
DVB TV - အင်တာနက်စာမျက်နာအစီအစဉ်
DVB TV - အင်တာနက်စာမျက်အစီအစဉ်
DVB - Women & Election - Playlist
DVB TV - ရွေးကောက်ပွဲနှင့်အမျိုးသမီးအစီအစဉ်
DVB election talk show - Playlist
DVB TV - ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအထူးအစီအစဉ်
DVB 2015 Election Day Coverage - Playlist
DVB TV - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမေးအဖြေအပိုင်း(၂)
DVB - ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ရှုံးသွားရင်လည်း ပြည်သူ့အကျိုး ဆက်လုပ်မယ်လို့ ဦးအုန်းမြင့် ပြော
DVB - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးမြို့နယ်အတွင်း မဲရုံများ လှည့်လည်ကြည့်ရှု
DVB - Election Hotline - Playlist
DVB TV - DVB Hot Line ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမေးအဖြေ အပိုင်း(၁)
DVB TV - ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမေးအဖြေအပိုင်း(၃)
DVB - In depth and Fact Check - Playlist
DVB TV - ထဲထဲဝင်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲအမြင် အစီအစဉ်
DVB TV - ထဲထဲဝင်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲအမြင်
DVB - Election Analysis - Playlist
DVB - စဉ်းစဉ်းစားစား မဲတစ်ပြား အစီအစဉ် (၃၉ )
DVB - စဉ်းစဉ်းစားစားမဲတပြား
DVB - ထဲထဲဝင်ဝင် ရွေးကောက်ပွဲ အမြင်
DASSK Europe Trip
DVB coverage on Daw Aung San Suu Kyi's 18-days trip in Europe.
DVB 15.06.2012 - Documentary - Duration:9minutes, 46 seconds.
47,528 views3 years ago 17:06
DASSK Speech @ ILO - Duration: 17 minutes.
22,468 views3 years ago 23:38
DASSK Press Conference @ ILO - Duration: 23 minutes.
11,111 views3 years ago 1:38
DASSK Arrival to Oslo - 15.06.2012 - Duration: 98 seconds.
19,900 views3 years ago 19:56
Oslo Forum - DVB 18.06.2012 - Duration: 19 minutes.
12,052 views3 years ago 10:57
DVB 17.06.2012 - DASSK meet Burmese community in Oslo - Duration: 10 minutes.
4,308 views3 years ago 42:58
DASSK @ Bergans - DVB 17.06.2012 - Duration: 42 minutes.
8,116 views3 years ago 1:02:49
DASSK @ LSE - DVB Live 19.06.2012 - Duration: 1 hour,2minutes.
41,671 views3 years ago 16:15
DASSK speech @ Oxford - DVB Live 20.06.2012 - Duration: 16 minutes.
18,862 views3 years ago 1:56:18
DASSK @ Oxford Uni - DVB Live 20.06.2012 - Duration: 1 hour, 56 minutes.
19,171 views3 years ago 6:08
DASSK visit to British Foreign & Commonwealth Office - Duration:6minutes, 8 seconds.
7,680 views3 years ago 47:28
DASSK @ UK Parliament - 22.06.2012 - Duration: 47 minutes.
27,918 views3 years ago View5more
DVBTVenglish - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe DVB Debate - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Doh Pyay Doh Myay - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe DVB Youth Voice - လူငယ့်အသံ - Channel
VOA Burmese - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe RFA MyanmarTVChannel - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe lin ker - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Eleven Web TV - Channel
SubscribeSubscribedUnsubscribe Kamayut Media - Channel